I-HGH yangempela e-Australia - i-HGH yezomthetho yokuthengisa i-Australia esuka eThailand
ngu-HGH Thailand Mashi 06, 2018
I-HGH Pharmacy eBangkok inikeza ukuthumela mahhala kuya Australia of i-hormone yokukhula yabantu. Ukusekela iziguli zethu Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, I-Gold Coast kanye namanye amadolobha nezindawo zase-Australia. Imikhiqizo ye-HGH evela kwenkampani yezokwelapha i-Pfizer. BuyHGHThailand.com yi-distributor esemthethweni yezimpahla ze-HGH eThailand. Yonke yethu imikhiqizo ube nezitifiketi zekhwalithi, imithi yesiguli kanye namalayisense.
Ukuthunyelwa nokukhishwa kwemikhiqizo ye-HGH kusuka kumthengisi we-HGH wezomthetho ku Australia
Ikhemisi yethu ineminyaka engaphezu kwe-3 yokuhlangenwe nakho ukuthumela i-hormone yokukhula Australia, ikakhulukazi ukuhamba kwe-hormone yokukhula ngokusebenzisa amasiko. Ukulethwa kwenziwa yi-delivery delivery express Ukukhishwa kwe-UPS kwenziwa nge-UPS yokuhlinzeka ngenkonzo ephaketheni ekhethekile kusuka ekhemisi yethu
Ukuxhaswa kwe-24 / 7 kumakhasimende ase-Australia (ukuguqulwa kuma-dollar)
Izindlela zokukhokha ezivikelekile zamakhasimende ase-Australia